Momba anay - Chengdu Luxury Lighting Technology Co., Ltd.
Be mpampiasa kokoa
Jiro mihaja ChengduTechnology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2011 ary manana tantara sy traikefa momba ny jiro mandritra ny 10 taona mahery. Rehefa afaka folo taona mahery ny fampandrosoana sy ny fanavaozana mitohy, ny Luxury dia niasa lalina ny filan'ny mpanjifa ary nanangona traikefa manankarena amin'ny vokatra sarobidy, nahatonga ny vokatray maharitra, mamiratra ary tia ny mpampiasa kokoa. Anisan'izany: Jiro alimina alim-baravarana alimina alim-baravarankely, hazavana alim-bolo alim-baravarankely misy alimo, jiro alim-bolo alim-baravarankely misy alim-baravarana, hazavana LED Linear miendrika U manokana, jiro Aluminium LED miendrika V, hazavana manokana LED alimina LED ary misy sns. Amin'izao fotoana izao dia lasa mpamatsy orinasa fanaka malaza any Chengdu (Vanke, Longhu, Longma Wood, Debei Furniture, sns) izy io. Matoky izahay fa hanampy ny mpanjifa eran'izao tontolo izao hanome vahaolana maivana amin'ny alàlan'ny Aluminium LED Linear mety amin'izy ireo.
Orinasa matotra matihanina mampiditra R&D, famokarana ary fivarotana vokatra jiro. Any Chengdu, faritanin'i Sichuan, Sina. Izy io dia manana tobim-pamokarana 800 metatra toradroa sy mpiasa 100. Misy tsipika famokarana matotra sy rafitra fanaraha-maso kalitao hiantohana ny fiarovana ny vokatra, ny faharetana ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny orinasa, manatsara ny hery malefaka entin'ny orinasa koa izahay ary miezaka manao izay hahatonga ny serivisy alohan'ny varotra, ny varotra ary ny serivisy aorian'ny varotra ho mahasoa ny mpampiasa. Ny vokatray lehibe indrindra dia ny jiro Aluminium LED Linear, hazavana fanaka namboarina, ao anatin'izany ny fantsom-boanjo alimina vita amin'ny alimina mba hifanaraka amin'ny tontolon'ny fampiharana isan-karazany.
Mifantoha amin'ny fifampiraharahana momba ny fampandrosoana ny vokatra fiaraha-miasa sy ny tetik'asa momba ny haitao trano amin'ny alàlan'ny orinasa fanaka namboarina.
Ny orinasanay dia napetraka ho toy ny mpamatsy vahaolana amin'ny vokatra, ny filan'ny mpanjifa lalindalina, manomboka amin'ny firafitry ny vokatra, fametrahana vokatra, fiantohana ny vokatra, manome ny vahaolana matihanina izahay. Raha tokony ho mpamatsy vokatra tsotra izahay, ny tanjaky ny jiro dia hitan'ny mpanjifa sy ny fotoana.
Tanjona: hanomezana vokatra sy serivisy namboarina ho an'ireo orinasa fanaka namboarina.
Fa maninona no mifidy LUXURY?
Antony 1: Ny vokatra amidinay dia tena tian'ny mpanjifa hividy; traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny jiro eo an-toerana, mba hananana sokajy vokatra maro, ary ny mpanjifa dia afaka misafidy ny Jiro LED Linear LED izay mety amin'izy ireo. Toy ny hidy, hazavana faran'izay tery bara, switch switch, switch swipe tanana, sns.
Antony 2: Mamaha ny olan'ny mpanjifa; manana karazana hazavana LED Linear LED namboarina izahay mba hamahana ny olan'ny mpanjifa
Antony 3: safidio ny vokatrao, ny mpanjifa dia manana ny risika ambany indrindra; mihoatra ny 10 taona traikefa amin'ny indostrian'ny jiro, ekipa mpamorona endrika tena tsara, ary serivisy aorian'ny varotra lavorary no antony lehibe ifidianan'ny mpanjifa antsika
Jiro manakaiky ny hazavana voajanahary, ary ataovy ahazoana aina kokoa sy azo tanterahina ny hazavana voarain'ny maso.
Tsy misy fihenan'ny tsindry
Mampiasà takelaka fizaran-tany FPC misy lafiny roa mba hahazoana antoka fa ny tadin'ny hazavana dia afaka mitondra ankehitriny kokoa ary mifandray amin'ny tady hazavana lava kokoa.
Tsy misy fahasamihafana loko
Eo ambanin'ny maripana mitovy loko dia mifehy ny fahasamihafan'ny loko amin'ny vakana LED ao anatin'ny 3sdcm izahay mba hahazoana antoka fa tsy misy fahasamihafana loko eo amin'ny andiany samihafa amin'ny Aluminium LED Linear Light miaraka amin'ny maripana mitovy loko.
Tsy misy jiro maty
Ny fonosana vakana hazavana LED dia mitaky ny fampiasana feno ny tariby volamena sy ny fonosana varahina mba hiantohana ny kalitaon'ny vakana hazavana LED, ary ny fizotry ny famokarana avo kokoa dia manome antoka fa voapetaka tsara ny vakana ary misoroka ny jiro maty.
Fanemorana maivana ambany
Mampiasà fantsona LED avo lenta miaraka amin'ny fahombiazan'ny hazavana avo lenta, ny famokarana hafanana ambany, ny fahalovana manjelanjelatra ary ny fahalovana manjelanjelatra ambany mba hiantohana ny androm-piainan'ny jiro LED maharitra.
Fahombiazan'ny hazavana avo
Izahay dia mitaky chip LED mba hananany fahombiazan'ny hazavana avoavo kokoa. Ny fahombiazan'ny hazavana avoavo kokoa dia hampihena ny hafanan'ny vakana jiro LED ary hahatonga ny jiro LED hitehirizana angovo bebe kokoa.